‘Waxaan laabta geliyay ninkii dilay aabahey’ | Berberanews.com
Home Qubanaha ‘Waxaan laabta geliyay ninkii dilay aabahey’
‘Waxaan laabta geliyay ninkii dilay aabahey’
Candice Mama markii ay 9 sano jir aheyd, waxay si qarsoodi ah u akhrisay buug ay hooyadeed ka qarin jirtay- buuggaas oo u horseeday inay wax ka ogaato dilkii loo geystay aabaheed, sanado kaddib Candice Mama waxay la kulantay isla markaana ay cafisay ninkii dilay aabaheed kaas oo la yiraahdo Eugene de Kock.
Gabadhan marka ay maqasho hees la oran jiray ‘Gabadhii ka timid magaalada Soweto’ waxay ku reebi jirtay xusuus maadama aabaheed uu si weyn u jeclaa dhageysiga heestaas.
Candice waxay ku dhalatay dalka Koonfur Afrika sanadkii 1991-dii, xilliggaas uu dalkan ka jiray nidaamkii ku saleysnaa midab-takoorka, kaas oo ku dhisnaa cunsuriyad iyo faquuq walow markii dambe meesha uu ka baxay.
Hooyadeed, Sandra, waxay kasoo jeeday qabaa”il kala duwan oo dega halkaas, halka aabaheed Glenack uu ahaa nin madow ah oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqii ka shaqeyn jiray danaha dadka Afrikaanka ah ee kasoo horjeeday midab takoorka balse waxay ka hor imaadsanaayen mabaadii’da ururkii ANC ee ahaa in dhammaan dadka ku nool Koonfur Afrika xuquuqdooda la simo.
Candice waxay inta badan ogeyd in aabaheed la dilay, xita waxay ogeyd ninkii dilka u geystay aabaheed oo la yirhaado Eugene de Kock, kaas oo ka tirsanaa boolis gaar ah oo loo xil saaray jirddilka iyo dilka ka dhanka ah dadkii kasoo horjeeday nidaamkii midab-takoorka.
Hooyadeed waxaa guriga u yaallay buug ka sheekeynayay dhibaatadii iyo murugadii ka dhalatay dadkii lagu dilay Koonfur Afrika xilliggii nidaamkii ku saleysnaa midab takoorka, buuggaas waxaa akhrin jiray dadka soo booqda gurigooda, marka ay akhriyaana wey ilimeyn jiray.
“Marka aan fursad ku helo buugan waan in aan akhriyaa oo aan eegaa”
Toddobaad kaddib markii Candice hooyadeed ay banaanka aaday, waxaa gabadhan u suurogshay inay laacdo buugga oo meel sare saarnaa, buuggaas oo hooyadeed ay ka qarin jirtay.
Waxay furtay buugga, waxay sheegtay inay ku aragtay sawirro muujinaya meydad gubtay- waxaana kamid ahaa meydka aabaheed oo ku dhex jira baabuur xilliggaas oo uu kaxeynayay baabuurkaas.
“Markiiba waxaa maskaxdeyda kusoo dhacay in sawirka uu yahay aabahey, sidan ayuu u dhintay, [Eugene de Kock] waa ninka dilay, marka waxaan ogaaday waxa aan sameeyay in uu ahaa khalad maadam la ii ogoleyn in aan akhriyo buugga”
Markii iyadoo 9 sano jir ah ay akhrisay buugaas, Candice niyadeeda gashay cuqdad iyo inay wajaheyso caddaalad darro.
“Waxaan buugga ku arkay sawirradiisa iyo qoraalladiisa iyo hadalladii xigmadda lahaa ee uu ka tegay”
“Haddaladiisa waxaa kamid ahaa, Kama dhigno in haddii aad tahay qof Afrikaan ah in nolosha aad horumar ka gaari karin” ayay tiri Candice.
Xanuunkii iyo welwelkii ay ka qaaday Candice arrintaas waxay saameyn ku yeelatay caafimaadkeeda.
Habeen habeenada kamid ah iyadoo 16 jir ah waxaa loola cararay cisbitaal kaddib markii ay dareentay xanuun dhanka xabadka ah waxaa laga cabsi qabay in uu ku dhacay wadno xanuun.
“Maalinkii danbe dhakhaatiirta waxay ii sheegeen in aan qabin wadno xannuun”
“Kuma aanan faraxsaneyn nolosha, waxaan wajahayay caafimaad darro” ayay tiri Candice.
Waxay bilowday waddo kasta oo ay caafimaad ku heli laheyd, waxay ogaatay in laga soo raacay sawirradii ay aragtay ee ku saabsanaa dilka aabaheed, waxay qaaday tallaabo kasta oo ay ku yaren karto murugada iyo welwelka heysta, waxay bilowday inay raadiso ninkii dilay aabaheed.
Sanadkii 1995-tii kaddib markii Koonfur Afrika ay ka dhaceen doorashooyinkii ugu horreeyay oo u dhacay qaab dimuqraadi ah, oo uu ku guuleystay hogaamiyihii xisbiga ANC, Nelson Mandela, waxaa xilliggaas la sameeyay guddiga runta iyo dib u heshiisiinta si loo baaro tacaddiyaddii ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay dalkaas xilliggii maamulkii ku saleysnaa midab-takoorka, Candice waxaa u sooragashay inay hesho dokomentiyo muujinaya qaabkii loo dilay aabaheed.
Dadka waxaa laga codsanayay inay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ay ka cabanayaan, Candice waxay cabasho kasta ku qortay magaca ninkii dilay aabaheed Eugene de Kock .
Markii ay aragtay dokumentiyadaas, wey carootay isla markaana waxay qortay ‘xusuus qoraaleed’ waxay sheegtay inay la yaabtay sida uu falkaas u dhacay.
Sanadkii 2014-kii, Candice hooyadeed waxaa soo wacay mas’uuliyiin ka tirsan waaxda dacwad oogista qaran, waxayna weydiyeen in qoyska ay doonayaan inay ka qeyb qaataan kulan looga hadlayo dilka loo geystay seygeeda iyo in si ka fool fool ah ay ula kulmaan ninkii dilka geystay ee Eugene de Kock.
Candice waxay xilliggaas jirtay 23, hooyadeed ayaa weydisay, maxaan sameynaa?
“Waxaan ku iri haddii aan wax ka qaban waayno arrintani waxay igu noqon doonaa su’aal i dhibi doonto ka jawaabisteeda inta ka har nolsoheyda” ayay tiri Candice.
Markii aan gaarnay qolkii dadka lagu wareysnayay, qoyska waxay bilaabeen inay la hadlaan ciidamada xabsiga iyo baaderiga, waxaan arkay Eugene de Kock isaga oo fadhiya goobta” ayay tiri Candice.
Waxay sheegtay in labo arrimood ay ka yaabiyeen.
“Wuxuu u ekaa qof naxsan, sawirradii aan horey u arkay markii aan yaraa waxay u eg yihiin ninkan goobta fadhiya”
Markii uu baaderiga munaasabadda furay ninka 65 jirka ah Eugene de Kock wuxuu ku tiirsaday gidaarka wuxuuna yiri “Waxaa farxad ii ah in aan idiin la kulmo”
Candice iyo hooyadeed waxay bilaabeen inay weydiyaan su’aalo ku saabsan waxa dhacay 26-kii bishii Maarso sanadkii 1992-dii- xilliggaas oo uu dilka dhacay.
Eugene wuxuu u sheegay in isaga iyo kooxdiisa xilliggaas loo diray inay tegaan xero si uu soo aqoonsadaan dadka ugu aqoonta badan ee mayalka adag ee halista ee ka tirsanaa ururkii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda dadka madowga ah, ayay tiri Candice, waxayna soo xusheen aabahey iyo saddex qof oo kale.
Maalinkaas aabaheed wuxuu kaxeynayay baabuur xilli uu ku wajahnaa deegaanka Nelspruit, oo 350 kiiloomitar dhinac bari kaga beegan magaalada Johannesburg.
“Ma uusan ogeyn xilliggaas in Eugene De Kock iyo kooxdiisa ay kusoo qaadayaan weerarka gaadmo ah” ayay tiri Candice.
“Aabahey wuxuu kaxeynayay baabuurka xilli uu marayay buunddada [Nelspruit], kooxda wey ku fureen rasaas”
Markii uu socday kulanka ay guddiga runta iyo dib u heeshiisiinta ay kula kulmayeen dhibaanayaashii nidaamkii midab takoorka, qoyska Candice waxaa la siiyay fursad ay su’aalo ku weydin karaan Eugene.
Candice waxay dooneysay inay weydiso hal arrin.
Waxaan ku iri “Eugene waxaan doonayaa in aan ku cafiyo balse wixii intaa ka horreeyo waxaan doonayaa in aan ogaado hal arrin, wuxuuna igu yiri maxay tahay arrintaas”
Candice, “Waxaan ku iri, Adigu ma is cafin kartaa?
Wuxuu ku jawaabay “Mar kasta uu qoys halkan yimaado, waana su’aasha aan ku duceysto in weligey aanan la ii weydin”
“Marka aad sameyso wax lamid ah waxa aan aniga sameeyay, sidee adiga isku cafin kartaa?
Candice wey ooysay, waxayna ogaatay in Eugene weligiisa uu si nabdoon ku noolaan doonin.
“Labadeenu waxaan aheyn dad niyo jabsan oo is hor fadhiya, waxay aheyd xilli aan isbaddal ku dhaqaaqi karno” ayay tiri Candice.
Markii uu kulan dhammaaday, Candice wey istaagtay waxayna ka codsatay Eugene in xabadka ay geliyaan.
Wuxuu igu yiri “Waxaan ka xumahay wax aan sameeyay, aabahaana wuxuuna faraxsanaan lahaa halkan aad maanta joogto”
Candice Mama oo ka hadleysay kulan ay soo qaban qaabisay hay;adda Nelson Mandela Foundation
Sanadkii 2015-kii, Eugene xabsiga ayaa laga soo daayay, waana arrin ay ka shaqeeyeen qoyska Candice, sida ay sheegtay gabadhaas.
Dhibanayaal badan ma aysan ogolaadeen in la cafiyo Eugene balse cafiska Candice waxay u horseeday inay hesho xoriyad ah sidii ay uga bogsan laheyd welwelkii iyo dhibaatadii soo gaartay markii ay yareyd kaddib markii ay aragtay sawirrada muujinayay dilka gurucan ee loo geystay aabaheed.
Candice waxay qortay buug ay uga hadleyso nolosheeda oo ay ugu magac dartay ‘Cafiska oo dib loo micneeyay’
Previous articleBurco: Madal loo sammeeyay musharrax Maxmed Xaaji Yaasiin
Next article132 Maxbuus oo Jaamacad kaga Qalinjebiyey jeel dhexdii